Xukuumadda Somaliland Oo Albaabada U Xidhay Xafiiskii Telefiishanka Universal Ee Hargeysa | Somaliland.Org
July 26, 2008	Hargeysa (Geeska)- Xukuumadda Somaliland, ayaa albaabada u xidhay xafiiska uu magaalada Hargeysa ku leeyahay Telefiishanka Universal oo ah Telefiishan Afka Somaliga ku hadla oo laga daawado Satalaytka, kaas oo ay xaruntiisa guud tahay magaalada London ee dalka Ingiriiska.
Ma jiro war rasmi ah oo ay xukuumadda Somaliland ka soo saartay xidhitaanka xafiiska Telefiishankaas oo muddooyinkii u dambeeyay ka hawl galayay gudaha Somaliland, laakiin waxa la sheegay in wasiirka warfaafinta Somaliland Md. Axmed Xaaji Daahir, toddobaadkan soo saaray qoraal amraya inaanu telefiishankaasi wax warar ah ka gudbin karin gudaha wadanka Somaliland. Ilo xogogaala ayaa Wargeyska Geeska Afrika u sheegay in xukuumadda Somaliland ka cadhootay barnaamijyo iyo waraysiyo uu Telefiishankaasi baahiyay, kuwaas oo ay magaalada Hargeysa ka direen koox weriyayaal cusub ah oo ay madaxda sare ee Telefiishankaasi dhawaan shaqaalaysiiyeen. Waraysiyada uu Telefiishankaasi baahiyay ee ay xukuumadda Somaliland ka cadhootay ayaa waxa ka mid ahaa laba waraysi oo ay weriyayaashaas cusubi ka qaadeen guddoomiyaha xisbiga UCID Md. Faysal Cali Waraabe iyo Suldaan Maxamed Suldaan Cabdiqaadir. Waraysiyadaas oo ay labadan masuul si adag ugaga hadleen mudaharaadkii dhawaan Hargeysa gil-gilay ee ka dhashay riiggii koonfurta Hargeysa biyaha ka qodayay ee la raray, ayaa waxa ay damqeen madaxtooyada Somaliland, oo tallo ka dib go’aamisay in albaabada loo xidho xafiiska Telefiishankaasi uu ku leeyahay magaalada Hargeysa.
Madaxda sare ee Telefishanka Universal, ayaa dhawaan magaalada Hargeysa ka shaqaalaysiiyay weriyayaal cusub, iyadoo ay hore u jireen weriyayaal wakiil u ahaa telefiishankaas oo iyana shaqadoodii wata. Sida ay wararku sheegayaanna amarka xukuumaddu kaga joojisey telefishanka Universal ayaa ka dhashay, saxafiyiinta kale ee cusub ee uu telefiishanku qaatay, taas oo la sheegay inay xukuumadu u aragto mid ka baxsan heshiis ay hore ula gaadhay madaxda Telefiishanka oo ahaa in laba weriye oo keliyi oo xukuumadu ruqsad siisay u joogaan Hargeysa, kuwaas oo ay ka war hayso. Telefiishanka Universal ayaa muddo ka hor baahin jiray wax qabadka Madaxweyne Daahir Rayaale Kaahin, taas oo la sheegay inay ka mid ahayd heshiiska ay labada dhinac gaadheen, waxase la sheegay inay arrintaas isku khilaafeen madaxda sare ee hay’adaasi.
Wasiirka warfaafinta Somaliland Md. Axmed Xaaij Daahir, oo uu Geeska Afrika, xalay isku dayay inuu arrintan wax ka weydiiyo, ayaanay u suurto gelin, ka dib markii aanu ku weynay khadka Telefoonka oo aanu ku baadi goobnay.
Xigasho: Wargeyska Geeska Afrika, Hargeysa